Date : 22 Jul 2015
सुनको भाउ ४ वर्षकै सस्तो, तोलाको ४८ हजार
काठमाडौं, साउन ६ । बुधबार स्थानीय बजारमा सुनको भाउ चार वर्ष यताकै कम मूल्यमा झरेर किनबेच भइरहेको छ । बुधबार सुनको भाउ तोलामा १५ सय रुपैयाँ
देशविदेश र विभिन्न संघ संस्थाबाट ३३ हजार १६ वटा सुझाव संकलन
काठमाडौं, साउन ६ । ‘नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा’ माथि मंगलबार राति १२ बजेसम्म देश तथा विदेशका व्यक्ति तथा विभिन्न संघ संस्थाबाट ३३ हजार १६
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संशोधनमाथि पूर्वराजाको सुझाव
काठमाडौं, साउन ६ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । सभासदहरुले नागरिकका सुझाव संकलन गरेको भोलिपल्टै पूर्वराजा शाहले पनि मस्यौदा संशोधन
तेस्रो दिन पनि जनकपुरमा बन्द
काठमाडौं, साउन ६ । संविधानको मस्यौदामा मधेशीलाई विभेद गरेको भन्दै केही मधेशी दलले आज तेस्रो दिन पनि जनकपुर बन्द आह्वान गरेका छन् । बन्दमा मधेसी अधिकार संघर्ष
प्रारम्भिक मस्यौदा माथि रामेछापमा दुई दिने सुझाव संकलन कार्य सम्पन्न
रामेछाप, साउन ६ । नेपालको संबिधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा माथि रामेछापमा दुई दिने सुझाव संकलन कार्य शान्तिपुर्ण रुपले सम्पन्न भएको छ । संबिधान सभाबाट साउन
बन्दले पूर्वी क्षेत्र ठप्प
जनकपुरधाम, साउन ५ । मधेस अधिकार संघर्ष समितिले जनमत संकलनको दोस्रो दिन मंगलबार जनकपुर बन्दको कार्यक्रम यथावत राखेको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा मधेस विरोधी रहेको
आङकाजीले मच्चाए उत्पात
काठमाडौं, साउन ५ । साम्प्रदायिक भड्काउने व्यवहारमा निपूर्ण मानिएका जातीय राज्यपक्षधर आङकाजी शेर्पाले मस्यौदाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुझाव संकलनका लागि भएको कार्यक्रममा हुलहुज्जत गरेका छन् । आफू
मस्यौदाको विरोधले थप्यो चुनौति
काठमाडौं, साउन ५ । संविधान निर्माणका लागि बनेको प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा जाने क्रममा एउटा फरक विरोधको श्रृंखलाले संविधान जारी हुँदाका बखत मुलुकको परिदृश्यलाई झल्याकाइदिएको छ ।
६३ वटा धारा संशोधन गर्न बारको सुझाव
काठमाडौं, साउन ५ । विभिन्न व्यक्ति, संस्थाहरुबाट संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव आउने क्रम मंगलबार पनि रह्यो । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने पेशा अँगालेका कानून व्यवसायीहरुले
Date : 20 Jul 2015
सबैले मुलुकको सर्वोत्तम हितका लागि मूल्य, मान्यता र आदर्शको बाटोमा हिँड्नुपर्छ : प्रम
नेपालगन्ज, साउन ४ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जनता नै सबै शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मान्यतालाई अंगालेर संविधान जारी गरिने बताएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२
विद्यमान संक्रमणकाल अन्त्य हुँदैछ�
दमक, साउन ४ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विद्यमान संक्रमणकाल अन्त्य हुनै लागेको बताएका छन् । झापाको दमकमा उनले प्रमुख दलहरूबीच भएको १६ बुँदे
सबै समस्यालाई जिम्मेवार भएर हल गर्ने वचन भारत सरकारले दिएको छ : दाहाल
काठमाडौं, साउन ४ । भारत सरकारले नेपाल र भारतबीच रहेको सीमा समस्या समाधान गर्न तयार रहेको विश्वास दिलाएको छ । साताव्यापी भारत भ्रमणमा गएका एकीकृत नेकपा
सेनाले बुझायो मस्यौदामा आफ्नो सुझाव
काठमाडौं, साउन ४ । नेपाली सेनाले संविधानको पहिलो मस्यौदामा आफ्नो सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाएको छ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति गौरवशम्शेर जबरासहित बलाध्यक्ष रथी राजेन्द्रकुमार क्षेत्री,
वीर थापा की कायर थापा ?
सुबास सुनुवार काठमाडौं, साउन १ । जसले भगवानको नाममा राजनीति गरेर भगवानलाई धोका दिन्छ, त्यसबाट मुलुकले के आशा राख्न सक्छ ? यो प्रश्न राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाका
नेपाल बैंकको शेयर र जग्गाको कमिशन सिइओको भान्सामा
भूपेन्द्र आचार्य काठमाडौं, साउन १ । नेपाली कांग्रेसका अर्वपति नेता एवं अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई १ करोड बुझाएर नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नाममा
भारतीय नेतालाई दाहालले सुनाए तीन गल्ती
काठमाडौं, असार ३१ । नयाँ संविधानको मस्यौदामा सुझाव लिन सभासदहरु जनतामाझ गएका बेला भारत भ्रमणमा रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विहीबार भारतका विपक्षी दलका नेताहरुसँग सामुहिक
माग पुरापछि एमाले बजेट पारित गर्न सहमत
काठमाडौ, असार ३१ । बजेटप्रति असन्तुष्ट एमाले र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतबीच एमाले नेता मदन भण्डारीको नाममा स्टेडियम बनाउने सहमति भएको छ । यससँगै पेश्की बजेट
सरकारी निकायद्वारा नै सडक बिस्तारको अबज्ञा
हेटौडा, असार ३१ । डिभिजन सडक कार्यालय मकवानपुरले सडक बिस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरिको भन्दै मकवानपुर जिल्ला मालपोत कार्यालय र जिल्ला नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको
अविरल वर्षाका कारण पोखरामा एकको मृत्यु, बर्दियामा सात सय घर डुबानमा
काठमाडौं, असार ३१ । देशभर भएको वर्षाको कारण देशका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोका कारण एक जनाको मृत्यु भएको छ भने बर्दियामा सात सय घर डुबानमा परेको
बन्दले पूर्वको जनजीवन प्रभावित, सात पक्राउ
झापा, असार ३१ । लिम्बुवान राष्ट्रिय क्रान्तिकारी पार्टीले अरुण पूर्वका नौ जिल्लामा आह्वान गरेको आम हडतालका कारण विहिबार पूर्वको जनजीवन प्रभावित भएको छ । अरुण पूर्व
सामुदायिक पूर्वाधार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै रामेछाप
काठमाडौं, असार २९ । स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको सामुदायिक पूर्वाधार कार्यक्रम मार्फत रामेछापको विभिन्न गाविस लाभान्वित भएको छ । खानेपानीको हाहाकारबाट प्रताडित रामेछाप जिल्लाको
मलेसियास्थित नेपाली दुताबासले आफ्नो देशको सर्वाेच्च अदालतलाई झुठो व्यहोराको पत्र दिएर ढाँट्यो
कोपरासीमार्फत काम गराउने कार्य जारी, सर्वोच्चमा कोपरासीलाई काम दिन बन्द गरिएको पत्र काठमाडौं/क्वाललम्पुर, असार २९ । मलेसियास्थित नेपाली दुताबासले आफ्नो देशको सर्वाेच्च अदालतलाई झुठो व्यहोराको पत्र दिएर
सरकारी कर्मचारीको तलब बढेन, वृद्ध भत्ता दोब्बर
काठमाडौं, असार २९ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भूकम्पले निम्त्याएको विपत्तिका कारण यस वर्ष कर्मचारीहरुको तलब बढाउन नसकिएको बताएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्र सेवकहरुको पारिश्रमिक
भूकम्पको प्रभाव बजेटमा
काठमाडौ, असार २९ । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको आव २०७२÷०७३ को बजेट वक्तव्यमा गत वैशाखमा आएको भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पको प्रभाव परेको
श्रम राज्यमन्त्री-व्यवसायी वार्ता निष्कर्षविहिन
आन्दोलन र वार्ता सँगसगै : व्यवसायी आन्दोलन फिर्ता गर्नुस : राज्यमन्त्री काठमाडौं, आसर २९ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मंगलबार मन्त्रालय र व्यवसायीबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहिन भएको
राप्रपा नेपालद्धारा जनमत संकलन बहिस्कार
काठमाडौं, असार २९ । संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालका सभासदहरुले नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनमत संकलन बहिस्कार गर्ने भएका छन् । उसले जनमत संकलनलाई
संविधानको मस्यौदा अनधिकृतरुपमा बिक्री
काठमाडौ, असार २९ । संविधानसभाले निःशुल्क प्रचारप्रसार र राय सुझावका लागि वितरण गरिरहेको संविधानको पहिलो मस्यौदा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अनधिकृत बिक्री भएको पाइएको छ ।
प्रचण्डको भारत यात्राको सर्वत्र विरोध
काठमाडौं, असार २९ । नेपालका नेताहरुको दिल्ली यात्राको नेतृत्व गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आज भारततर्फ लाग्दैछन् । संविधानसभाले नयाँ संविधानको मस्यौदा जनतामा पठाउने निर्णय गरे लगत्तै
दुताबासका कर्मचारीलाई कामै पिच्छे कमिशन
क्वालम्पुर, असार २९ । मलेसियास्थित नेपाली दुताबासका कर्मचारीहरुले आवश्यक कामको लागि त्यहाँ आएका नेपालीहरुसँग कामैपिच्छे कमिशन लिने गरेको आरोप मलेसियामा रहेका नेपालीहरुले लगाएका छन् । मलेसियास्थित नेपाल वैदेशिक
मुलुकको राजनीतिक संकट अन्त्य भई नयाँ संविधान आउने सुनिश्चित : प्रधानमन्त्री कोइराला
काठमाडौं, असार २९ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमति, सहकार्य र एकताबाट नै मुलुकको राजनीतिक संकट अन्त्य भई नयाँ संविधान आउने सुनिश्चित भएको बताएका छन् । झापाको
Pages 132 : You are at page 70 of 132